त्रिभुवन विमानस्थलको शौ'चालय पनि पुगे पर्यटनमन्त्री भट्टराई, हाकिमलाई सो'धे ‘टि'स्यु पेपर खै’ ? 'काम ग'र्न नस'क्ने भए ठाउँ खा'ली गर्नुहोस्' -
त्रिभुवन विमानस्थलको शौ’चालय पनि पुगे पर्यटनमन्त्री भट्टराई, हाकिमलाई सो’धे ‘टि’स्यु पेपर खै’ ? ‘काम ग’र्न नस’क्ने भए ठाउँ खा’ली गर्नुहोस्’
काठमाडौं, २६ पुष । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई शनिबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आ’कस्मि’क अ’नुगम’नमा पुगे । उनले विमानस्थलको शौचालयको पनि अनु’गम’न गरेका छन् । केही दिन अघि विमानस्थलको शौचालयको विषयलाई लिएर मन्त्री भट्टराईको सामाजिक सञ्जालमा निकै आ’लो’चना भएको थियो । एक अमेरिकी नागरिकले विमानस्थलको शौचालयका बारेमा ट्वीट गरेपछि भा’इर’ल भयो । सो ट्वीटलाई लिएर मन्त्रीले गरेको टिप्प’णीका का’रण उनी वि’वा’दित बनेका थिए ।
शनवार जब मन्त्री भट्टराई विमानस्थलको शौचालयहरु हेर्न पुगेका थिए । उनले शौचालय प्रयोग समेत गरे । शौचालयमा हात धोएपछि पुछ्न टिस्यु पेपर पनि देखेनन् न त शौचालयमा ड्रयाकर मेसिन नै थियो । किन नराखेको भनेर विमानस्थल हाकिम र सरसफाइ व्यवस्थापन हेर्नेहरुसँग उनले प्रश्न गरेका छन् । मन्त्रीको प्रश्न पछि ब्यवस्थापनका कर्मचारीले ड्रयार मेसिन ल्याउन टेन्डर भइसकेको भन्दै टार्न खोजेका थिए ।
उनीहरुले यात्रुले टिस्यु पेपरले जुत्ता पनि पुछ्ने गर्दा धेरै खर्च हुने भन्दै टिप्पणी गरेका थिए । ब्यवस्थापनका कर्मचारीको त्यस्तो जवाफ सुनेपछि मन्त्री भट्टराई जंगिए र भने,’हुन्छ त खर्च, हात पुछ्न त पर्‍यो नि !’उनले यसबारे नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रमुख राजन पोखरेलको पनि ध्या’नाक’र्ष’ण गराएका छन् । मन्त्री भट्टराईले विमानस्थलको शौचालय फोहर भएको भन्दै पोखरेलसंग अस’न्तु’ष्टि राखेका थिए ।
उनले शौचालयको ब्यवस्था गु’नासो नआउनेगरी सुधार गर्न नि’र्देशन दिएका छन् । विमानस्थलवाटै पहिलो धारणा बन्ने भएकाले त्यस तर्फ ध्यान दिन पनि सुझा’व दिए । विमानस्थलमा जथा’भा’वी फालिएका फोहर देखाउँदै उनले तत्काल सरसफाइमा ध्यान दिन निर्देशन दिए ।
यस अघि पर्यटनमन्त्री भट्टराई पशुपती मन्दीरको अवस्थाका बारेमा पनि अनुगमनमा निस्किएका थिए । शनिबार पशुपति मन्दिर क्षेत्रको अवलोकन तथा निरीक्षण गर्न गएका मन्त्री भट्टराईले त्यस क्षेत्रको शौचालयको अवस्थाका बारेमा पनि अनुगमन गरेका छन् । उनले पशुपति क्षेत्रभित्रका प्रायः सबै भागमा पुगेर त्यहाँको वस्तुस्थिति र व्यवस्थापनको अवस्थाबारे जानकारी लिएका हुन् । पर्यटनमन्त्री भट्टराईले शनिबार दिनभर पुशपति क्षेत्रकै अवलोकनमा बिताए ।
अवलोकन पछि उनले १५ दिनभित्रै पार्किङ क्षेत्र व्यवस्थित गर्न र पसल राख्न अ’वै’ध रुपमा बनाइएका टहरा हटाउन भट्टराईले पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई नि’र्देशन दिए । उनले मूलमन्दिर, अन्य मन्दिरहरु, पुनर्निर्माण भइरहेका सम्पदा स्थलहरु, प्रमुख बगैँचा, धर्मशाला, गौसाला, भेटी व्यवस्थापनको अवस्था, जुत्ताचप्पलको व्यवस्थापन, विदेशी पर्यटकको टिकट काट्ने काउन्टर, विशेष पुजाको व्यवस्थापनको अवस्था लगायतमा जा’नकारी लिए ।
उनले मन्दिरको सुरक्षा व्यवस्था, किरि’याया’पु’त्री भवन र त्यहाँ उपलब्ध सेवा सुविधाका बारेमा पनि जा’न’कारी लिएका थिए । विद्युतिय शव द’हन र घा’ट’को अव’स्था, दाउ’राको उपलब्धताका बारेमा पनि जानकारी लिएका थिए । साथै पशुपति दर्शनका लागि आउनेहरुका लागि निर्माण गरिएका शौ’चालयको पनि पर्यटनमन्त्रीले अव’लोकन गरेका छन् । उनले पशुपति आउने भक्तालु र पर्यटकलाई कुनै सास्ती नहुन गरी सबै प्र’वन्ध’हरु मि’ला’नउन नि’र्दे’शन दिए ।
दुई हप्ता लक’डाउन गर्न सरकारलाई विज्ञहरूको सुझाव, के फेरी होला त लकडाउन ?
हाँस्यव्यङ्ग्य कलाकारहरु भन्छन् ,” नेताहरुले तीन सय ६५ दिन नै नक्कली गाइजात्रा…
भदौ १ गतेदेखि आन्तरिकतर्फ दैनिक ४८ उडान हुने भनिएपनि उडानमा अन्योल कायमै
सङ्क्र’मित पत्ता लगाउन स’मस्या भएपछि अब परीक्षण गराउँदा परिचयपत्र…
लागुऔ’षधसहित एकजना प’क्राउ